नुनका गुण र अवगुण, दैनिक कति खानुपर्छ नुन ? जान्नुहोस् | NepalDut
नुनका गुण र अवगुण, दैनिक कति खानुपर्छ नुन ? जान्नुहोस्
नुन स्वादका दृष्टिले मात्र होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि नुन अत्यन्त महत्वपूर्ण यौगिक हो। तर अनुचित मात्रामा प्रयोग गरिएको नुनको सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक सावित हुनसक्छ।
वयस्क व्यक्तिले दैनिक ५ ग्राम नुनभन्दा कम लिनुपर्छ भने केटाकेटीले १।२ ग्रामभन्दा ज्यादा लिनु हुँदैन। अझ सोडियमको मात्रामा भन्नुपर्दा दैनिक १५०० मिग्रा सोडियम उत्तम हो र यो मात्रा २३०० मिग्राभन्दा ज्यादा हुनुहुँदैन।
उच्च मात्रामा नुन सेवनले रक्तचाप बढाउँछ। नुनको उच्च मात्राले रक्तचाप बढाउने हुँदा मुटुरोग र मस्तिष्कघातको खतरा पनि बढ्छ। नुनको कारणले हुने उच्च रक्तचापलाई लवण संवेदनशील उच्च रक्तचाप भनिन्छ। लवण संवेदनशील उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई नुन बार्न थाल्दा रक्तचाप कम हुन्छ। तर स्वस्थ व्यक्तिले नुन बार्दा रक्तचापमा खासै फरक पर्दैन। एउटा अनुसन्धानले स्वस्थ व्यक्तिले नुन छोड्दा सिस्टोलिक रक्तचाप २।४२ मिलिमिटर अफ मर्करी ९एमएमएचजी० ले र डायस्टोलिक रक्तचाप १ ९एमएमएचजी० ले घटेको तथ्य पाइएको छ।
शरीरमा सोडियमको मात्रा कम भए लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन कोलेस्टेटोल र ट्राइग्लिसवेराइड (टिजी)को मात्रा बढेको पाइएको छ।
– उच्च सोडियमले हड्डीको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पु¥याउँछ। उच्च सोडिएमको सेवनले पिसाबबाट उच्च मात्रामा क्याल्सियम पनि उत्सर्जन गराउने हुँदा रगतको क्याल्सियम नष्ट हुने र यसको पूर्ति गर्न हड्डीबाट क्याल्सियम रगतमा आउने हुँदा हड्डीहरू चाँडै खिइने गर्छ।